Farmaajo oo baaq ka so saarey colaada Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Farmaajo oo baaq ka so saarey colaada Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland
Farmaajo oo baaq ka so saarey colaada Tukaraq ee Puntland iyo Somaliland
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa baaq ka soo saarey dagaalka ka dhex qarxay Somaliland iyo Puntland maanta oo Saalasa ah kadib muddo shan bilood ah oo labada ciidan is horfadhiyeen oo lagu fashiley waan-waan beesha caalamka iyo waxgarad labada dhinac ah wadeen.
Madaxweynaha ayaa dagaalka ku tilmaamey mid macno daaro oo aan lo baahneyn, waxaana uu ku baaqey in si deg-deg ah lo joojiyo.
Waa markii u horeysey ee Madaxweynaha Jamhuuriyaddu Maxamed Cabdullaahi uu ka hadley colaadda Tukaraq, waxaana xusid mudan in Somaliland ay weerarkii hore ay ugu qabsadeen Tukaraq ku beegeen maalintii uu booqashada ku tegey Garoowe ee 8 Janaayo 2018, taas oo la aminsan yahay mid ay ku carqaladeynayeen booqashadiisa, hadiyadna uga dhigayeen.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Guddoomiyaha xisbiga Ucid ee Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa labaduba ku eedeeyeen Farmaajo in uu ka danbeeyo dagaalka maanta dhex marey iyaga iyo ciidanka Puntland.
Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho ku joga dalka Qatar.
Akhri bayaanka ka so abxay Madaxweynaha
15ka May, 2018